Jenesis 9 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
9 Chineke wee gọzie Noa na ụmụ ya wee sị ha: “Mụọnụ ọmụmụ, baanụ ụba, jupụta ụwa.+ 2 Egwu unu na ụjọ unu ga-ejide ihe ọ bụla e kere eke dị ndụ n’ụwa, tinyere anụ ufe ọ bụla nke eluigwe na ihe ọ bụla na-agagharị agagharị n’ala nakwa azụ̀ niile dị n’oké osimiri. A na-enyefe ha n’aka unu ugbu a.+ 3 Anụ ọ bụla na-agagharị agagharị nke dị ndụ pụrụ ịbụrụ unu ihe oriri.+ Dị ka m nyere unu ahịhịa ndụ, m na-enye unu ha niile.+ 4 Ma unu erikọtala+ anụ na mkpụrụ obi ya+—ọbara ya.+ 5 M ga-ajụkwa ajụjụ ọbara unu bụ́ mkpụrụ obi unu. M ga-ajụta ya n’aka ihe ọ bụla e kere eke dị ndụ; m ga-ajụtakwa mkpụrụ obi mmadụ+ n’aka mmadụ, n’aka onye ọ bụla nke bụ́ nwanne ya. 6 Onye ọ bụla nke na-awụfu ọbara mmadụ, mmadụ ga-awụfu ọbara ya,+ n’ihi na Chineke kere mmadụ n’oyiyi ya. 7 Ma unu onwe unu, mụọnụ ọmụmụ, baakwanụ ụba, jupụtanụ n’ụwa, baakwanụ ụba n’ime ya.”+ 8 Chineke wee gaa n’ihu ịgwa Noa, ya na ụmụ ya, sị: 9 “Ma mụ onwe m, lee, m na-eme ka ọgbụgba ndụ m+ dịrị n’etiti mụ na unu na ụmụ unu ndị ga-anọchi unu,+ 10 na mkpụrụ obi ọ bụla dị ndụ nke unu na ya nọ, n’ime anụ ufe, n’ime anụ ụlọ nakwa n’ime ihe niile e kere eke dị ndụ n’ụwa ndị unu na ha nọ, malite ná ndị niile si n’ụgbọ a na-apụta ruo n’ihe ọ bụla e kere eke dị ndụ n’ụwa.+ 11 Ee, m na-eme ka ọgbụgba ndụ m dịrị n’etiti mụ na unu: Iju mmiri agaghị egbu anụ ahụ́ niile ọzọ, a gaghịkwa enwe iju mmiri ọzọ ibibi ụwa.”+ 12 Chineke sịkwara: “Nke a bụ ihe ịrịba ama+ nke ọgbụgba ndụ a m na-eme ka ọ dịrị n’etiti mụ na unu nakwa mkpụrụ obi ọ bụla dị ndụ nke unu na ya nọ, n’ọgbọ niile ruo mgbe ebighị ebi. 13 Eke na egwurugwu m+ ka m na-eme ka ọ dịrị n’ígwé ojii, ọ ga-abụ ihe ịrịba ama nke ọgbụgba ndụ nke dị n’etiti mụ na ụwa. 14 Ọ ga-erukwa na mgbe m mere ka ígwé ojii gbachie ụwa, eke na egwurugwu ga-apụta n’ígwé ojii. 15 M ga-echetakwa ọgbụgba ndụ m+ nke dị n’etiti mụ na unu nakwa mkpụrụ obi ọ bụla dị ndụ n’ime anụ ahụ́ niile;+ mmiri agaghịkwa aghọ iju mmiri ọzọ ibibi anụ ahụ́ niile.+ 16 Eke na egwurugwu ga-apụtakwa n’ígwé ojii,+ m ga-ahụkwa ya wee cheta ọgbụgba ndụ a nke ga-adịru mgbe ebighị ebi+ n’etiti Chineke na mkpụrụ obi ọ bụla dị ndụ n’ime anụ ahụ́ niile dị n’elu ụwa.”+ 17 Chineke wee gwa Noa ọzọ, sị: “Nke a bụ ihe ịrịba ama nke ọgbụgba ndụ a m na-eme ka ọ dịrị n’etiti mụ na anụ ahụ́ niile nọ n’elu ụwa.”+ 18 Ụmụ Noa+ bụ́ ndị si n’ụgbọ ahụ pụta bụ Shem na Ham na Jefet. E mesịa, Ham mụrụ Kenan.+ 19 Mmadụ atọ a bụ ụmụ Noa, ọ bụkwa site na ha ka ndị bi n’ụwa si gbasaa ebe niile.+ 20 Noa malitere ịrụ ọrụ ubi,+ o wee kọọ ubi vaịn.+ 21 O wee ṅụwa mmanya ya, o wee gbuwe ya egbu,+ ya mere, ọ gbara onwe ya ọtọ n’ime ụlọikwuu ya. 22 E mesịa, Ham+ nna Kenan hụrụ ọtọ+ nna ya wee gaa kọọrọ ya ụmụnne ya abụọ n’èzí.+ 23 Shem na Jefet wee chịrị ákwà mgbokwasị+ wụkwasị ya n’ubu ha abụọ wee jiri azụ banye. Ha wee kpuchie ọtọ nna ha, ka ha chere ihu ha ebe ọzọ, ha ahụghịkwa ọtọ nna ha.+ 24 N’ikpeazụ, Noa tetara n’ụra mmanya ya wee mata ihe ọdụdụ nwa ya mere ya. 25 O wee sị: “Ka Kenan bụrụ onye a bụrụ ọnụ.+ Ka ọ bụụrụ ụmụnne ya ohu nke dị ala karịsịa.”+ 26 Ọ sịkwara: “Ka Jehova, bụ́ Chineke Shem, bụrụ onye a gọziri agọzi,+ Ka Kenan bụrụkwa ohu ya.+ 27 Ka Chineke nye Jefet ebe sara mbara, Ka o birikwa n’ụlọikwuu Shem.+ Ka Kenan bụrụkwuo ohu ya.” 28 Noa wee dịrị ndụ ruo narị afọ atọ na iri ise mgbe iju mmiri gasịrị.+ 29 Ụbọchị niile Noa dịrị ndụ wee bụrụ narị afọ itoolu na iri ise, o wee nwụọ.+